Yu Huan milina Co., Ltd. no nodimbiasany ny Ningbo Shuangyu (Samewe) ordinatera Flat knitting Machine Manufacturer Co., Ltd., niorina tamin'ny taona 1990,
izany dia feno milina fampidirana orinasa orinasa mpamokatra entana R & D, famokarana, ny varotra sy ny asa fanompoana. Hatramin'ny andro nisiany tamin'ny 1992, dia efa miara-miasa amin'ny mpitarika ao an-toerana sy ny orinasa manana fitaovana famokarana fitaovana sy ny fikarohana siantifika mafy fahaizany
Tamin'ny fiandohan'ny 2006, ny orinasa nahatonga ny orinasa mpamokatra entana fototra ho Ningbo Shina ho lehibe kokoa amin'ny fampandrosoana toerana tena tapa-kevitra ary nanomboka namokatra ordinatera Flat knitting Machines tamin'ny taona 2007. Ny orinasa mandrakotra ny faritra 28000 ㎡, ny trano dia 25000 faritra ㎡ . Amin'izao fotoana izao, dia misy maherin'ny 500 ny mpiasa, anisan'izany ny mpiasa ara-teknika isaina ho an'ny mihoatra ny 40%.
Tamin'ny anatin'ny 28 taona , Shuang Yu mifikitra foana ny olona-mirona fandraharahana filozofia: fanavaozana sy ny fampandrosoana ny tsena, manaraka ny kalitaon'ny hakingan-tsaina, ary ny mandresy ny mpanjifa amin'ny fanompoana. Nitari-dalana foana izahay sy nampahery zava-baovao, ary ny vola tanteraka amin'ny fiofanana manokana sy ny teknolojia fikarohana sy ny fampandrosoana, ary firenena maro no efa nahazo Patents teknolojia.
Ankehitriny, Shuang Yu manana birao zanabolana ao India, Torkia, Vietnam sy ny faritra hafa amin'izao tontolo izao, ny vokatra efa naondrana any ampitan-dranomasina sy be ekena sy nidera ny tsena ao an-toerana.
"Aza mitsahatra any, dia aza hadinoina ny mpanao voalohany ny saina". Amin'ny hoavy fampandrosoana, Shuang Yu dia mbola manaraka ny lalana ny "teknolojia avo, avo avo kalitao sy ny fitokisana", miaraka amin'ny teknolojia mafy, fitaovana tsara sy tonga lafatra ny fitantanana, dia hanome vokatra tsara sy ny asa fanompoana ho an'ny mpanjifa traikefa.
Innovation tsy mitsahatra, ny ho avy no manam-petra. Shuang Yu mitady fatratra efa mandroso tanana-in-tanana eo aminareo fiaraha voninahitra!